Daacish oo caqabad ku ah canshuurta Al Shabaab – Madal Furan
Hoy > Warka > Daacish oo caqabad ku ah canshuurta Al Shabaab
Daacish oo caqabad ku ah canshuurta Al Shabaab
Editor August 22, 2018 Warka 0
Kooxda dawladda islaamiga ayaa “canshuur xad-dhaaf ah” ku soo rogtay ganacsatada iyo shirkadaha waqooyiga bari ee Soomaaliya, wax u muuqda isku day ay kula xafiiltamayaan farsamooyinka canshuur uruurinta ee Al Shabaab.
IS waxay farriimo hanjabaad ah u direen ganacsatada iyo meheradaha, ayagoo amar ku siiyey “inay si joogto ah u bixiyaan lacago canshuur ah” ama ay khatar u galaan dhimasho.
“Ganacasatada iyo meheradaha Boosaaso weli waxay ku shaqeeyaan jawi cabsi leh, ka dib markii lacag aad u badan ay weydiisteen kooxda dawladda Islaamiga qaybteeda gobolka” Garowe Online ayaa sidaa ka soo xigatay qof ganacsade ah.
Inta ay le’eg tahay lacagta ay tahay in qof walba ama shirkad walba ay dhiibto ayaan la cayimin.
Si degdeg ah oo aan caado u ahayn ayey Al Shabaab durbaba u beeniyeen mas’uuliyadda falkaas, taasoo muujisay in kooxda IS ay dhici karto inay mas’uul ka ahayd.
Mareegta wararka ee Dhacdo waxay sheegtay in dilka “lala xiriirinayo lacago ay IS uruuriyeen, lana arkay farriimo lagu cabsi galinayo dad kale”.
2dii Agoosto, maxkamad ku taalla Muqdisho waxay xukun ku ridday laba shakhsi oo lagu helay inay IS la shaqaynayeen, ayna isku dayayeen inay ka furaan qaybta kooxdaas ee koofurta Soomaaliya. Mid ka mid ah dadka la eedeeyey, Maxamed Daa’uud daahir Warsame, wuxuu mas’uul ka ahaa uruurinta lacagta dibadda laga soo xawilo ee la soo mariyo shirkadaha xawaaladaha, sida lagu xusay caddaymaha maxkamadda.
Maraykanku wuxuu kaloo xayiraad ku soo rogay Maxamed Mire Cali Yuusuf iyo shirkadihiisa, Liibaan Trading iyo Al Mutafaq Commercial Company – ayagoo lagu eedeeyey inay dhaqaale ku siiyaan IS (Daacish) Soomaaliya. Maxamed waxaa markii dambe Muqdisho ku qabtay ciidanka sirdoonka ee Soomaaliya. Wuxuu beeniyey inuu xiriir la leeyahay IS.
Kooxdu waxay kaloo leedahay koox maaliyadeed oo qiimaysa qiimaha badeecadaha iyo adeegyada, ka hor inta aan canshuur lagu soo rogin. Waxay kaloo qaadaan canshuurta maridda waddada, waxayna lacago ka qadaan dadka hodanka ah ee u shaqeeya hay’adaha iyo shirkadaha.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Max’ed Cali Gaas wuxuu sheegay in ganacsatada Boosaaso ay canshuur siiyaan Al Shabaab ayagoo ka baqaya in la ciqaabo, halkii ay maamulkiisa siin lahaayeen.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa isna ku eedeeyey ganacsatada inay lacag badan oo canshuur ah siiyaan Al Shabaab halkii ay ka siin lahaayeen xukuumadda Federaalka.
Kooxda waxaa lagu qiyaasaa in ay uruuriyaan ilaa 27 Malyan oo Doollar oo canbshuur ah sannadkiiba. Laakinse lacagtaas badankeed – 25 malyan oo ka mid ah waa la kharash gareeyaa. Waxaa la sheegay in aysan ku guuldarraysan inay dagaallamayaashooda mushaar siiyaan.
Mareegta wararka Garowe Online ee u janjeerta dhanka dawladda waxay sheegtay in dagaallamayaasha IS ay si baad ah bil walba ganacsatada iyo dadka ladan ee ku nool Garowe uga qaadaan lacag lagu qiyaasay 72,000 oo Doollar.
Gaas oo xilalkii ka qaaday Guddoomiyaha G/Nugaal iyo Taliyayaal Ciidan
Dekedda Boosaaso oo doonyo raran dibadda looga saaray iyo goobaha ganacsiga magaalada oo xirmay
Sawiro:- Ra’iisul Wasaare Khayre oo Kigali Kula Kulmay Dhiggiisa Rwanda, Edouard Ngirente.